I-25 Scholarship yaBafundi baseNigeria yokufunda kwelinye ilizwe i2022
I-25 Scholarship yaBafundi baseNigeria yokufunda kwelinye ilizwe
Esi sithuba siphathelele kwizifundi zabafundi baseNigeria zokufunda phesheya, ke ukuba unomdla wokulandela isidanga esikwelinye ilizwe kwaye awunakho ukubanakho kwezemali, eli nqaku linokukunceda. Ngobufundi, unganakho ukufundisisa eyunivesithi oyithandayo.
INigeria lilizwe elisaphuhlayo kwaye isenendlela ende ekusafuneka ihanjwe xa kufikwa kwinkqubela phambili njengamanye amazwe aphuhlileyo anjenge China ne-USA. Ukuxhobisa ilizwe kunye nokuqhubela uqoqosho phambili phambili izinto ezininzi kusafuneka zifundwe ilizwe elingenako ukubanika abafundi bakhe ngamaziko akhe aphezulu.
Ke, abantu baseNigeria baya phesheya ukuya kufunda, bafumane izakhono ezifanelekileyo kunye nolwazi, kwaye bayibuyise kwilizwe ukuze bayenze.
Njengelizwe elisaphuhlayo, ayinazo izinto ezininzi kubandakanya namaziko akhe njengoko kungekho zibonelelo zaneleyo okanye iilebhu ezixhotyiswe ngokwaneleyo kunye nezinye izinto ezinokuthi zenze kube lula ukufunda kwabafundi.
Amazwe afana neCanada, i-United States of America, China, i-UK, kunye namanye amazwe aphuhlileyo ahlaziye amaziko abo abenza ukuba babe phezulu kwiziko lokufunda lehlabathi.
I-5 Scholarship yaseCanada yaBafundi baseNigeria
Isiseko seTrudeau Scholarship
IYunivesithi yaseCalgary International Entrance Scholarship
Abafazi kwiNkqubo ye-STEM Scholarship
Amabhaso eYunivesithi yase York
I-5 UK Scholarship yaBafundi baseNigeria
IYunivesithi yaseDundee Scholarship yaBafundi baseNigeria
IYunivesithi yaseCambridge African Scholarship Awards
IYunivesithi yaseRobert Gordon ye-Vice Chancellor's Undergraduate Scholarship
IYunivesithi yaseBirmingham yaseNigeria ePhumelele kwiMpumelelo yeScholarship
Uphuhliso lweTrasti yeLoughborough yeAfrika
I-5 United States Scholarship yaBafundi baseNigeria
Inkqubo ye-Mastercard Foundation Scholars kwiYunivesithi yaseCalifornia
Amabhaso eAmerican University Merit Scholarship Award kuMfundi wamanye amazwe
Uncedo lwaMazwe ngaMazwe lwaBaseTyhini lwaBasetyhini
UMargaret McNamara Izibonelelo zezeMfundo
Inkqubo yaBafundi beZizwe eziManyeneyo
I-5 Scholarship yaseYurophu yaBafundi baseNigeria
Inkqubo yoLwazi lweorenji, eNetherlands
I-Swedish Institute Scholarships kwi-Global Professionals (SISGP)
I-Stipendium Hungaricum I-Scholarship exhaswa ngemali ngokupheleleyo
I-UHR Scholarship-iYunivesithi yoKhuselo yaseSweden
I-Ecole Normale Superieure yoKhetho lwaMazwe ngaMazwe lweScholarship
I-5 Scholarship yaseTshayina yaBafundi baseNigeria yokufunda kwelinye ilizwe
Scholarship kaRhulumente waseShanghai
IYunivesithi yaseTsinghua Yunivesithi yabafundi bamanye amazwe
IYunivesithi yaseJiaxing yeYunivesithi yaseMelika
I-Peking University Scholarship (PKUS)
I-Zhejiang University Scholarship yaBafundi beZizwe ngezizwe
Ngokubanzi, ukufunda phesheya ngamava amangalisayo kuye wonke umntu eyona ngxaki iphambili yindleko. Ukufunda phesheya kubiza kakhulu kwaye nangona abantu abaninzi befuna ukonwabela amava abangenako ngenxa yeendleko.
Omnye umba ngokufunda phesheya ngumqobo wolwimi, kodwa oko kunokuba lula ukusonjululwa ngokufaka isicelo eyunivesithi kwilizwe elithetha isiNgesi okanye isiFrentshi. Kwabemi baseNigeria, iya kuba ngamazwe athetha isiNgesi kwaye oko akusileli, kukho i-UK, ezinye iindawo zaseCanada, e-USA, njl.
Ewe, ukufunda phesheya kuyabiza kakhulu kodwa kukho isisombululo soko, izifundiswa; Eso sisisombululo.
Amazwe aPhuhlileyo avula iingcango zawo kubafundi abavela kuzo zonke iindawo zehlabathi ukuba beze kuyalela imfundo yakhe ekumgangatho wehlabathi kumaziko abo awaziwayo kwaye abenzi nje "ukuvula iingcango" la mazwe anikezela ngamathuba okufunda afanelekileyo kwaba bafundi ukuze bakwazi ngokwenyani bonwabele amava apheleleyo emfundo kumaziko abo ahlukeneyo.
Ezi nkxaso mali zibizwa ngokuba "zizo izifundiswa zamanye amazwe" kwaye zihlala zifumaneka kubafundi kuzo zonke iinkqubo kunye namanqanaba okufunda.
Njengomntu waseNigeria, ukuphumelela izifundiswa zamanye amazwe kuza nezixa ezingapheliyo zezibonelelo zazo ezinye zezi;
Ufumana ukuphonononga kunye namava ezinye iindawo zehlabathi.
Ungasebenzisa eli thuba ukufunda ulwimi olutsha, inkcubeko entsha.
Ufumana unxibelelwano lwamanye amazwe kwaye wenze abahlobo abatsha
Uyonwabela imfundo ekumgangatho wehlabathi kumaziko aphezulu
Amathuba amakhulu emisebenzi kunye nophuhliso lomntu
Ufumana ukonwabela amava onke.
Izizathu azipheli, ukubona ukuba inkqubo yemfundo eNigeria iphosakele, kwaye ukulandela isidanga kwilizwe elifana neCanada okanye i-UK lithuba elikhulu.
Nangona kunjalo, iNigeria lelona lizwe likhulu e-Afrika, ngokomhlaba nangokwezoqoqosho, kwaye ikwanobudlelwane namazwe amaninzi aseYurophu nawaseAsia. Ngenxa yoku kunye nezinye izizathu, la mazwe akhetha ukubonelela ngezifundo kubafundi baseNigeria ngaphezulu kwabafundi abavela kwamanye amazwe.
Ukusondeza la mathuba okufunda kufutshane nabafundi baseNigeria esikulo Study Abroad Nations bonisa ulwazi malunga ne-scholarship evela e-UK, eKhanada, e-United States, eYurophu nase-China.
Elinye lala mazwe minyaka le libonelela ngezifundo zabafundi baseNigeria zokufunda phesheya kwaye bafumane izakhono ezikumgangatho wehlabathi kunye nolwazi abanokuthi balusebenzise ukuqhubela ilizwe labo phambili.
Uhlala unqwenela ukufunda kwelinye ilizwe, amaphupha akho anokufezeka. Ngena kula mathuba okufunda kwaye uqaphele amaphupha akho okufumana isidanga samanye amazwe.
Oku kulandelayo kukufunda kwabafundi baseNigeria ukuba bafunde phesheya, ungaya nakweyiphi na indawo ekufaneleyo.
ICanada yenye yezona ndawo ziphambili zokufunda kwihlabathi elinamaziko aphakamileyo awaziwayo anika imfundo ekumgangatho wehlabathi.
Amaziko aseCanada amkelwe kwilizwe liphela ngokubonelela ngemfundo esemgangathweni kubafundi basekhaya nakwamanye amazwe. Amawakawaka abafundi bamanye amazwe bayathontelana ukuya eCanada minyaka le ukuya kulandela inkqubo yezidanga abazithandayo.
Ikomiti yemfundo yaseKhanada yamkela abafundi bamanye amazwe phantse njengabafundi basekhaya kwaye ibabonelele ngamathuba okufunda. Nangona abemi kunye nabahlali abasisigxina baseCanada bonwabela ngakumbi amathuba okufunda ngaphezulu kwabafundi bamanye amazwe nangona kunjalo banikezelwa.
Abafundi baseNigeria banokufaka izicelo zala mathuba wokufunda waseCanada.
The I-Vanier Canada Graduate Scholarship yenye yezifundo zabafundi baseNigeria zokufunda phesheya kwaye zixabise i $ 50,000 ngonyaka iminyaka emithathu yezifundo.
I-scholarship ifumaneka kuphela kubafundi abaphumelele kwimimandla yezempilo, isayensi yezendalo kunye / okanye ubunjineli, kunye noluntu kunye nophando loluntu.
Abaphumeleleyo bakhethwa ngokusekwe kwizifundo ezigqwesileyo, ukubakho kophando, kunye nezakhono zobunkokeli njengoko izifundi zenzelwe ngokukodwa ukutsala abafundi abaphumeleleyo. IVanier CGS ikuvumela ukuba ufunde nokuba yeyiphi na kwezi ndawo zophando zilapha ngasentla kulo naliphi na iziko likarhulumente laseCanada.
Eyaziwa ngokupheleleyo njenge UPierre Elliot Trudeau weSiseko seScholarship, yenye yezifundo zabafundi baseNigeria zokufunda phesheya kulo naliphi na iziko laseCanada abazikhethele lona.
Isiseko seTrudeau sibonelela ngezifundo, kwaye senzelwe ukuqeqesha nokuxhobisa abagqatswa abagqwesileyo abagqwesileyo ngezixhobo ezifanelekileyo kunye nolwazi lokwabelana nokusebenzisa uphando lwabo kwaye babe ziinkokheli zokuyila kumaziko abo noluntu.
I-scholarship ixabise i-60,000 yeedola ngonyaka iminyaka emithathu yezifundo zobugqirha kwaye igubungela iifizi zezifundo, iindleko zokuphila, uphando kunye nezibonelelo zokuhamba. Inkxaso mali yokufunda inikezelwa minyaka le, ke ukuba uthe wayiphosa kulo nyaka, unokuhlala uyifaka isicelo kulo nyaka uzayo.
IYunivesithi yaseCalgary ibonelela ukungena kwizifundo zamanye amazwe ukuze abafundi baseNigeria bafunde phesheya. Inkxaso mali yokufunda inikezelwa minyaka le kubafundi baseNigeria abafundela isidanga abeza eyunivesithi okokuqala kwaye benemidlalo eqinileyo kwizikolo zabo zamabanga aphakamileyo.
Yimali yokufunda exhaswa ngokupheleleyo exabisa i-15,000 yeedola kwaye ivuselelwa iminyaka emithathu eyongezelelweyo yokufunda.
Ukuze ufanelekele le ngxowa-mali kufuneka upase iimfuno zolwimi lwesiNgesi ezibekwe yiDyunivesithi yaseCalgary kwaye kufuneka ufake isicelo kwinkqubo yesidanga sokuqala kwiziko elinye.
I-STEM imele iSayensi, iTekhnoloji, iinjineli, kunye neMathematics.
The Abafazi kwi-STEM yokufunda igcinelwe kuphela abafazi baseNigeria abafuna ukufunda eCanada kwaye bakweyiphi na indawo ye-STEM yokufunda. Yasekelwa ukuxhobisa abantu basetyhini kwi-STEM abanamakhono aphezulu emfundo. Banokufunda nakweliphi na iziko laseCanada eliyinxalenye yombutho we-MPOWER.
Abafakizicelo be-scholarship kufuneka ukuba bamkelwe kwinkqubo yexesha elizeleyo kwiziko laseCanada elixhaswa yi-MPOWER kwaye inemvume yokufunda yaseCanada.
Ibhaso lokubhalwa kwemali liBhaso eliZukileyo le- $ 3,000 kunye neeNgxelo eziHloniphekileyo ze- $ 1,000, khumbula ukuba le mfundo yeyabafazi baseNigeria kuphela.
IYunivesithi yaseYork ineembasa ezingaphezu kweshumi elinambini zokufunda zabafundi bamanye amazwe ezifumanekayo kubafundi baseNigeria abafuna ukufunda phesheya. IYunivesithi yaseYork yenye yeeyunivesithi eziphezulu zaseCanada kwaye ibambe nokwamkelwa kwilizwe jikelele.
Iyunivesithi ibonelela ngezi mali zokufunda kubafundi baseNigeria ukuba bafunde phesheya simahla kwaye bajoyine imfundo yakhe esemgangathweni ngaphandle koxinzelelo.
The Amabhaso eYunivesithi yase York zinikezelwa minyaka le kubafundi baseNigeria abaza eyunivesithi okokuqala kwiinkqubo zesidanga sokuqala.
Ngelixa ezinye zeemali zokufunda zixhaswe ngemali inxenye zixhaswa ngokupheleleyo, kuya kufuneka uye kwabo bafumana inkxaso-mali ngokupheleleyo njengoko zinokuhlaziywa kude kube sekupheleni kwenkqubo yesidanga sokuqala.
I-United Kingdom kunye neNigeria zidityaniswe ngeendlela ezingaphezulu kweshishini, ukuba yinkosi yamakoloniyali yokugqibela kwaye nangoku okuhle. Abantu baseNigeria banikezelwa ngamathuba amahle okufunda kwabafundi abafuna ukulandela isidanga okanye isidanga sokuqala kumaziko ase-UK.
I-Commonwealth, Erasmus Mundi, urhulumente wase-UK, kunye neeyunivesithi bayabandakanyeka ekuboneleleni ngezi zibonelelo zokufunda zabafundi baseNigeria ukuba bafunde phesheya.
Thina Study Abroad Nations babonelele ngesihlanu kwezona ziphezulu izifundi zase-UK kubafundi baseNigeria ukuba bafunde phesheya kwiyunivesithi yase-UK ngaphandle kokukhathazeka ngezifundo.
IYunivesithi yaseDundee liziko eliphezulu lokufunda e-UK kwaye ngaphezulu kwabafundi abayi-140 baseNigeria ababhalise kwizidanga zakhe zesidanga sokuqala, isidanga sokuqala kunye neenkqubo zesidanga sokuqala.
The Iyunivesithi inezifundo ezingaphezulu kwesiqingatha seshumi elinambini kubafundi baseNigeria ukuba bafunde phesheya e-UK simahla. Izifundo ziyafumaneka kubafundi abafuna ukulandela inkqubo yokufunda kwizidanga zokuqala, izidanga, kunye nenqanaba lokuthweswa isidanga.
The KwiYunivesithi yaseCambridge ubonelela ngenkxaso-mali kubantu baseAfrika ukuba bafunde kule nqanaba liphezulu lemfundo yokufunda kwaye abafundi baseNigeria abaxolelwa ekufakeni isicelo. Inkxaso mali yokufunda kunye nezinye iibhasari ziyafumaneka kwizidanga zokuqala zaseNigeria, abafundele isidanga kunye nabaphumeleleyo.
Ezi nkxaso-mali zingaphaya kweshumi elinambini zokuqinisekisa ukuba ziyahamba kwiimfuno zazo ngaphambi kokuba uqale isicelo.
Le yenye yezifundo zabafundi baseNigeria zokufunda phesheya kwaye ngeli xesha kwenye yeeyunivesithi ezidumileyo e-UK.
I-Vice-Chancellor ye-Undergraduate Scholarship kwiYunivesithi yaseRobert Gordon yeyabafundi abasafundela isidanga bamanye amazwe- abantu baseNigeria babandakanyiwe- abafuna ukwenza isidanga sokuqala eyunivesithi.
Isifundi sigubungela umrhumo womfundi wokuqala wokufunda kunye nabafakizicelo kufuneka bahambe kwiimfuno ngaphambi kokufaka isicelo.
Eli thuba lokufunda liboniswa njengenye yezifundo zabafundi baseNigeria zokufunda phesheya kwiYunivesithi yaseBirmingham yase-UK.
I-scholarship inikezelwa ngonyaka kubafundi be-12 baseNigeria, abaxabisa ii-2,500 zama-Euro nganye, ababhalise kwinkqubo yokuqala ye-grade-grade eyunivesithi.
IYunivesithi yaseBirmingham Isifundo seNigeria esiphumeleleyo unikwa kuphela unyaka wokuqala wokufunda ngokusisigxina kunye nabafundi abaneerekhodi ezigqwesileyo zemfundo abemi kumathuba angcono okuphumelela ibhaso.
Le ngxowa-mali inikelwa ngu IYunivesithi yaseLoughborough kwaye ijolise kubantu baseAfrika, eyenza ukuba abafundi baseNigeria nabo bafaneleke.
I-scholarship iyafumaneka kubafakizicelo bezidanga zokuqala abasandula ukubhaliswa kwiYunivesithi yaseLoughborough kwaye bahlawula iifizi zezifundo zonyaka omnye.
Abafakizicelo ababonisa impumelelo ebalaseleyo yemfundo bemi sethubeni lokuphumelela ibhaso lokufunda, nangona kukho iimfuno ezingaphezulu ekufuneka uzazi ngaphambi kokufaka isicelo.
I-United States yenye yezona ndawo ziphambili zemfundo kwihlabathi, njengoko ibambe iiyunivesithi eziphambili zehlabathi kunye namanye amaziko emfundo aphezulu.
Kukho izifundi zabafundi baseNigeria zokufunda phesheya ngokukodwa kwiiyunivesithi zaseMelika nakwiikholeji kwaye bajoyine imfundo yakhe esemgangathweni kunye namava amangalisayo.
Sikhethe ezona ziphezulu I-United States Scholarship zabafundi baseNigeria zokufunda phesheya zezi;
Ngaba uhlala uphupha ngokufunda ngenkqubo oyikhethileyo kwiDyunivesithi yaseCalifornia? Ewe, nali ixesha lokuba iphupha lizaliseke, kwaye ngeli xesha ufunda kwinkqubo yokufunda exhaswa ngemali ngu I-Mastercard Foundation.
Isifundi zombini zabafundi baseNigeria bezidanga zokuqala kunye nezidanga zemasters ekufuneka benze isicelo sokwamkelwa eyunivesithi kwaye bahlangabezana neemfuno zokufunda.
Isiseko seMastercard siyaziwa ngokubonelela ngamathuba okufunda kwabafundi abavela kumazwe aseAfrika kwaye le yenye yezinto ezininzi.
The IYunivesithi yaseMelika ibonelela ngezifundo ezibini ezifanelekileyo kubafundi baseNigeria ukufunda kwelinye ilizwe ngokukodwa kule yunivesithi.
Iingxowa-mali zikhuphisana kakhulu kwaye zinikezelwa ngokusekwe kumgangatho wazo, ke ngoko ukuba ufuna ukufumana isiqinisekiso sokufunda kufuneka ube neempawu eziphezulu. Ezi mpawu zisebenza ngokugqwesileyo kwimfundo, izakhono zonxibelelwano ezibalaseleyo ngesiNgesi, ivolontiya kunye nenkonzo yoluntu.
Izifundo zivela kwi- $ 4,000 ukuya kwi- $ 20,000 ngonyaka wezifundo kwaye ziyavuselelwa iminyaka emithathu eyongezelelweyo yesidanga sokuqala.
Olu manyano lwenzelwe abafazi abangaveli eUnited States eyenza ukuba abafundi baseNigeria bafaneleke ukufaka izicelo kodwa ngokungqongqo kwabafazi.
The Ubuhlobo beAAUW bamanye amazwe zinikezelwa kwabasetyhini ukuba bafune ukufundisisa ngokusisigxina okanye uphando eMelika.
Abafakizicelo bakhethwa ngokusekwe kwizifundo ezigqwesileyo kwaye babonisa ukuzibophelela kwabasetyhini nakumantombazana.
Ubudlelwane buyafuneka nakweliphi na iziko eliphakamileyo eMelika elinikezela ngokusisigxina kuphando okanye kwiinkqubo zokufunda.
Ifumaneka kuphela kubafundi abakumgangatho we-master, wobugqirha kunye nophando lwasemva kwexesha kwaye kufanelekile $ 18,000, $ 20,000, kunye ne- $ 30,000 ngokwahlukeneyo ezihlaziywa unyaka wesibini. Ngaphambi kokuba ufake isicelo sobudlelwane, abafaki-zicelo kufuneka bafake izicelo kumaziko abo okufunda.
Le yenye into ukufundela abasetyhini bamazwe aphesheya, Abantu baseNigeria babandakanyiwe, ukufunda kwiziko elivunyiweyo laseMelika okanye laseCanada.
Abafakizicelo kufuneka babe ubuncinci beneminyaka eyi-25 ngexesha lesicelo, ube ngumfazi kunye nomNigerian obhalisele inkqubo yexesha elizeleyo kulo naliphi na iziko lemfundo eliphezulu eUnited States okanye Canada.
Qho ngonyaka, abafundi baseNigeria bayabizwa Faka isicelo senkqubo yokutshintshiselana ngabafundi kwilizwe langaphandle Ukuyalela kwizifundi ezixabisa amawaka eedola ngomfundi ngamnye.
Ibhaso lelabafundi baseNigeria kuphela abagqirha okanye i-Ph.D. abafundi, abanye abafanelekanga ukufaka isicelo. Abaphumeleleyo bakhethwa ngokusekwe kwintsebenzo yemfundo eqinileyo, inqanaba eliphezulu lolwazi lwesiNgesi, izindululo ezinamandla zophando, kunye nokunye.
Isifundi sigubungela umrhumo wenqwelomoya, izibonelelo zokuhlala, isibonelelo senyanga, isibonelelo sezindlu, isibonelelo sekhompyuter, kwaye okokugqibela, iincwadi kunye nesibonelelo sonikezelo.
Ikwagubungela i-inshurensi yezempilo eyunivesithi kwaye ikhuphisana kakhulu ke ngoko qiniseka ukuba uhlangabezana neemfuno ngaphambi kokufaka isicelo.
Ngaba ujonge ukufunda eyunivesithi yaseYurophu usebenzisa izifundi? Kungenzeka ukuba senze uluhlu-kunye neenkcukacha-ze-5 eziphezulu ze-European scholarships kubafundi baseNigeria ukuba bafunde kwamanye amazwe.
Inkqubo yolwazi lweorenji (OKP), yenye yeefayile ze- Izifundo zaseYurophu eNigeria abafundi ukufunda kwelinye ilizwe ngokukodwa kuyo nayiphi na iyunivesithi yaseNetherlands.
I-scholarship ivulelekile kwiNkqubo yoQeqesho olufutshane kunye neenkqubo zeMasters kuwo onke amabakala okufunda kumaziko aphakamileyo aseNetherlands.
Yimali yokufunda exhaswa ngokupheleleyo kwaye abafundi abanomdla kufuneka bafake izicelo kwiziko abalithandayo kwaye bahlangabezane neemfuno.
Esi sisibonelelo semali esixhaswa ngokupheleleyo senzelwe abantu baseNigeria abafuna ukufunda phesheya ukuze bazokulandela inkqubo yesidanga se-master kwiyunivesithi yaseSweden. Le ngxowa-mali inokuhlawulwa kwezi yunivesithi zilandelayo;
I-Blekinge Institute of Technology
Iziko leRoyal Institute of Technology
IYunivesithi yaseLulea yeTekhnoloji
Isikolo seStockholm yezoQoqosho
IYunivesithi yaseGothenberg kunye
Ngaphambi kokuba ufake isicelo Isifundi seSISGP, Kuya kufuneka ufake isicelo sokwamkelwa kuyo nayiphi na inkqubo yesidanga senkosi kuyo nayiphi na iiyunivesithi ezidweliswe apha ngasentla.
Isifundi sikhuphisana kakhulu kwaye sigubungela iifizi zokufunda kunye neendleko zokuphila kangangesithuba seminyaka emi-2 yokufunda kwesidanga.
URhulumente waseHungary unesisa ngokubonelela ngemali yokufunda yamazwe aphesheya yokuba abafundi baseNigeria banelungelo lokufaka isicelo.
Esi sibonelelo sokufunda sisasazeka kuwo onke amabakala, oko kukuthi, abagqwesileyo, izidanga zokuqala, iinkosi, kunye nePh.D. abafundi banokufaka isicelo sayo. Iyaqhubeka nokugubungela zonke iikhosi kwaye isifundi sinokuhlawulwa kuyo nayiphi na iyunivesithi yaseHungary.
Ngaphambi kokuba ufake isicelo sale bhasari, kuya kufuneka ufake isicelo kwaye wamkelwe kwisidanga sokuqala okanye isidanga kwinkqubo yexesha elizeleyo kwiyunivesithi oyithandayo yaseHungary.
The Ukunyanzelwa kweHungaricum banesisa ngokwenene inkxaso-mali exhaswa ngokupheleleyo ngabafundi baseNigeria ukuba bafunde phesheya.
Isifundi sigubungela iifizi zokufunda, isibonelelo senyanga sokuhlawula iindleko zokuhlala, indawo yokuhlala epheleleyo, i-inshurensi yezempilo, ukuya nokubuya kumatikiti endiza.
IYunivesithi yoKhuselo yaseSweden ibonelela I-UHR yokufunda kubafundi bamanye amazwe Ngaphandle kwamazwe e-EU / EEA kunye neSwitzerland eyenza ukuba abafundi baseNigeria bayilungele.
I-scholarship iyafumaneka kubafundi abafuna ukulandela inkqubo ye-Bachelor's okanye ye-Master's degree kwiYunivesithi yoKhuselo yaseSweden.
Kuya kufuneka ukuba ufake isicelo kwisidanga esigcweleyo okanye inqanaba lenkosi eyunivesithi ukuze ube nokufanelekela oku.
Isifundi sigubungela kuphela iifizi zokufunda kwaye sijolise kubafundi abaneziphumo ezibalaseleyo zokufunda.
Abafundi bamanye amazwe abavela kulo naliphi na ilizwe banelungelo lokufaka isicelo sobufundi esenza ukuba abafundi baseNigeria balunge ngokulinganayo.
Le ngxowa-mali, njengabanye, ineemfuno zayo kunye nokubandakanya ukuba abafaki zicelo kufuneka babe ngaphantsi kweminyaka eyi-26 ubudala. Kufanele ukuba ube ngumfundi omtsha oza kungena Ulawulo lwe-Ecole Normale ukulandela inkqubo yenqanaba lediploma kubuGcisa noLuntu, ubuGcisa, noLuntu.
Nazi izifundi zaseTshayina zabafundi baseNigeria zokufunda phesheya;
URhulumente waseShanghai ubonelela ngezifundo zabafundi bamanye amazwe abangabo abemi beRiphabhlikhi yase China eyenza Abafundi baseNigeria banelungelo lokufaka isicelo.
Isifundi seso-bachelor's, master's, kunye ne-Ph.D. iinkqubo kwaye zigubungela iifizi zokufunda, indawo yokuhlala, isibonelelo sokuhlala, kunye neinshurensi ebanzi.
Yunivesithi yaseTsinghua inothotho lwezifundo zabafundi bamanye amazwe ezinje ngezi Chinese Government Scholarship, Siemens China Scholarship, kunye nezinye izifundi ezibekelwe bucala kuphela abafundi bamanye amazwe.
Abafundi abavela kuzo zonke iindawo zehlabathi babizwa ukuba bafake izicelo zezi bhasari kubandakanya abafundi baseNigeria.
Iingxowa-mali zezesidanga sokuqala, isidanga sokuqala, kunye nezidanga zabafundi, hamba kwiimfuno zabo ngaphambi kokufaka isicelo. Ngaphambi kokuba ufake isicelo kufuneka ubhalise kwinkqubo yexesha elizeleyo kwiYunivesithi yaseTsinghua.
IYunivesithi yaseJiaxing ibonelela nge- ezahlukeneyo zokufunda kwabafundi abangengabo baseTshayina kungoko abafundi baseNigeria banokufaka izicelo zezi bhasari.
Izifundo zamanye amazwe zijolise kubafundi ababalaseleyo kwezemfundo abaza kwiYunivesithi yaseJiaxing ukulandela inkqubo yesidanga sokuqala.
Izifundo ezahlukileyo ke ngoko ziza neemfuno ezahlukeneyo kunye nexabiso, zama ukuzijonga ngaphambi kokufaka isicelo.
IYunivesithi yasePeking ibonelela ukufundela abafundi ababalaseleyo bamazwe aphesheya abalandela izidanga eyunivesithi, kufuneka ukuba abafaki-zicelo bangabo baseTshayina ngenxa yoko abantu baseNigeria banelungelo lokufaka isicelo.
Ukulungela kwakhona, umgqatswa kufuneka afake isicelo kwaye sele amkelwe kwisidanga sokuqala, okanye inkqubo yesidanga sokuqala kwi-PKU.
Isifundi sigubungela zonke iinkqubo zesidanga- isidanga sokuqala, isidanga senkosi, isidanga sokuqala, kunye nogqirha- kwaye ikwafumana inkxaso-mali epheleleyo yokuhlawula iifizi zokufunda, iindleko zokuhlala, indawo yokuhlala kunye neinshurensi yezonyango.
IYunivesithi yaseZhejiang ibhasozela abafundi abafundi bamazwe aphesheya abafuna ukulandela inkqubo yesidanga sokuqala eyunivesithi.
Iingxowa-mali zinikezelwa ngokusekwa kukhuphiswano lwabafundi, irekhodi lezemfundo, kunye neminye imigangatho esekwe kwangaphambili.
Yisifundi esigcweleyo esigubungela iifizi zokufunda, indawo yokuhlala yasimahla, isibonelelo senyanga, kunye neinshurensi yezonyango ebanzi.
Ezi zezi izifundi zabafundi baseNigeria zokufunda phesheya, kufuneka ujonge iimfuno zokufunda ngaphambi kokuba ufake isicelo.
Ukwenza kube lula kuwe, amakhonkco kwisibonelelo ngasinye anikezelwa apho ungafumana khona ulwazi olubaluleke ngakumbi.
I-MTN Foundation Scholarships kubafundi baseNigeria
Izifundo zeYunivesithi zasimahla eMelika
IiYunivesithi ezingabizi kakhulu eCanada zaBafundi beZizwe ngezizwe
Isifundo kwamanye amazwe Isikhokelo Ukufunda kwelinye ilizwe kunye neScholarship
izifundi zabafundi baseNigeria zokufunda phesheya
Post Previous:I-10 yeeDyunivesithi eziGqwesileyo kuNcwadi lwesiNgesi kunye nokuBhala ngokuBumba
Okulandelayo Post:Iimfuneko zeUniversite Laval | Imirhumo, iScholarship, iiNkqubo, iZikhundla
obasi maxwell uthi:
February 5, 2022 kwi 9: 05 pm
Enkosi ngokwabelana ngale nto.
Kukwakho i-scholarship eqhubekayo yeYunivesithi yaseNigeria, khangela uluhlu kwiphepha lewebhu elingezantsi.
Pingback: Ezona zikolo ziPhambili ziPhambili ze-15 eLagos eNigeria 2021
UAbiodun lamidi uthi:
January 23, 2021 apha 10: 21 pm
Nceda undazise malunga nezifundo
February 2, 2021 kwi 7: 25 pm
Yenza kakuhle ubhalise kwizaziso zokutyhala.
February 5, 2022 kwi 9: 10 pm